Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1312 lar
Miasa sy mihinana (2Tes 3.9-12)
Alarobia 26 Sept.
Inona no olana manokana natrehin’i Paoly to amin’ny fiangonan’ny Tesalônianina? 2 Tes. 3:9-12. Ao amin’ireo andininy ireo i Paoly dia mampihatra amin’ny toe-javatra anankiray voafaritra mazava tsara ny zavatra nataony sy nolazainy. Nisy vondron’olona iray, nisy mambra maromaro ihany, mpanakorontana na tsy mpanara-dalàna (2 Tes. 3:6, 11). Efa noresahin’i Paoly tao anatin’ny taratasiny voalohany ny amin’io olana io, saingy tamin’ny fomba malefadefaka kokoa no nanaovany azy (1 Tes. 4:11, 12; 5:14).
Azon’i Paoly natao, amin’ny maha-apôstôly azy, ny nitaky vola sy trano ary sakafo avy tamin’ny fiangonana. Efa nametraka ohatra teo amin’izy ireo anefa izy ao amin’ny 1 Tesalônianina, ohatra ny amin’ny “fiasana andro aman’alina” mba tsy ho enta-mavesatra ho azy ireo (1 Tes. 2:9). Oha-pitiavana izany. Araka ny voalazan’ny 2 Tes. 3:8 anefa, dia niasa “andro aman’alina” koa izy mba ho ohatra ho azy ireo, ka tokony hiahy ny tenany sy izay zavatra ilainy avy ny tsirairay, araka izay azony natao.
Raha toa ka namela ohatra fotsiny i Paoly, dia nety ho nilaza ny sasany fa tsy mazava ny soatoavina nampitainy. Fa nampiasa fitenenana ihany koa izy mikasika io olana io. Nandritra ny fotoana fohy naha-teo anivon’izy ireo azy, dia nisy fomba fiteny fampiasan’ny maro nampiasainy matetika ho tahaka ny didy: “Raha misy tsy mety miasa, dia aoka tsy hihinana izy” - 2 Tes. 3:10.
Tsy ny ezaka atao hikarakarana ireo olona sahirana, na ireo tsy afa-miahy ny tenany, no kianin’i Paoly ao amin’io andalan-teny io. Rehefa dinihina, i Jesôsy mihitsy no efa namela ohatra mahery vaika, naneho fangoraham-po tamin’ireo osa na mahantra noho ny toe-javatra nitranga teo amin’ny fiainan’izy ireo.
Tsy izany fa ny nanahiran-tsaina an’i Paoly ary niantefan’ny teniny manokana dia antokon’olona iray tao am-piangonana izay ninia nidonana-poana mihitsy. Mivezivezy foana miraharaha ny an’olona izy ireo fa tsy mba ny azy (2 Tes. 3:11). Tahaka ny sasantsasany amin’ireo olon-kendry mamy hoditra fahiny, dia naleon’ireo mpino ireo nisafidy ny niaina tao anatin’ny fiadanana toy izay tao anatin’ny asa mafy. Angamba resaka teôlôjia na koa fitsikerana ny fitondrantenan’ny hafa no nandanian’izy ireo ny fotoany fa tsy mba nitady vola hamelomany ny tenany izy ireo. Mandidy azy ireo “ao amin’i Jesôsy Kristy Tompo” i Paoly mba hanaraka ny ohatra nomeny, amin’izay izy ireo hanana zo hiteny noho ny fiahiany voalohany indrindra ny zavatra ilain’ny tenany (3:12).
Mahagaga fa na teo amin’ny tantaran’ny fiangonana tany aloha ela indrindra tany aza, dia efa nisy olana marobe tokoa teo anivon’ny mambra tsy maintsy natrehin’i Paoly. Moa tsy tokony hiaro antsika (sy ireo mambra vaovao koa, indrindra indrindra) ve izany, tsy hahatonga antsika hihevitra fa olo-masina avokoa no hameno ny fiangonana? Zava-dehibe kokoa noho izany, ahoana no hahatonga antsika ho hery mahasoa eo anivon’ny fiangonantsika na dia eo aza ny fahadisoantsika sy ny fahalementsika?